pastor mwana pentecostal musikanzwa
Ndirikudawo kuregestar kwayedza repasvondo pega pega pafoni yangu
roora baba musikana imba
church pentecostal mwari tithe
Yangu yekuomera amana.foni yangu yakapera moto apo ndine kafree airtym ne madata bundles .apo zesa ranga raswera risipo.ndakati regai ndibaire kafoni pachrge ndizomuka kuna 22.00 .wanike aah aah ndabiwa nehope kusvika makuseni.ummh amanaka ndakarwadziwa zvekuti mukadzi anemimba hasvike ipapo.asi zvisinei hazvo ndakafonera Econet yakati ndozvazvinoita kana muchidiridzisa mvura yemulake Kariba
Zhing zhong - magetsi adzoka
Mumwe muChina ava namakore gumi achigara muZimbabwe akabvunzwa kuti wava kugona Shona here iye akati ndo kiya kiya.
Akabva anzo tiudzewo Shona yawava kugona achibva ati: " yeeeeee magetsi azhoka"!!!
china zesa magetsi
Heat Wave 2015 - Kudzima ma photo
Haa mapisiro arikuita kunze ndasvika paku deleter ma photo andakatorwa ndakapfeka juzi
Mighty Warriors ku Rio (Brazil) Olympics
Dai ma Mighty Warriors akando mitiswa kuBrazil ikoko vouya ne mimba kuti tiwane vanhu vebhora!
Zesa ne Eskom
Eskom : Magetsi anoita achienda
Zesa: Magetsi anoita achiuya! Saka dont say magetsi arikuenda because anotofanira kunge asiko
zesa magetsi eskom
Vamwe varume vakanga vasvibirwa vari parwendo, vakazosvika pamusha waMambo ndoku kumbira pokuvata.
Mambo aiva nevanasikana vake vaiva mbonga (ma virgin). Akaudza machinda aya kuti vaikwanisa kuvata havo, asi vaisafanira kubata vana vake.
Machinda aya akazoita musikanzwa ndokukwira vana vaMambo. Mambo paakazvinzwa mangwana acho, aka rwadziwa ndoku shevedza machinda kudare.
Machinda aya akabatwa nemhosva ndokunzi semutongo wavo umwe neumwe wavo aifanira kuenda kunotsvaka michero gumi (10) mudondo. Vakanzi zve, vaisa fanira kuseka pa dare raMambo. Ainge aseka ari padare aizo gurwa musoro.
Muchinda wekutanga akandouya ne nyii dzake 10, jinda raMambo ndokutora nyii dziya ndokutanga kupakira kushure kwemuchinda.
Gare gare, muchinda wepiri akauya ne tsubvu dzake 10, ndo kupakirwa tsubvu dziya shure.
Muchinda wetatu akanonoka kudzoka, zvekuti vanhu vakanga vototi watiza.
Kwava kunovira, muchinda we nyii newe tsvubvu vakatanga kuseka vachiridza chikweee.
Vakabvunzwa kuti vaisekei, vakatadza kutaura nekuseka. Vanhu vakazoona muchinda wetatu achiuya akatakura magaka eminzwa.
dare muchero mhosva mambo mhandara magaka
dofo mwana gumbura church pentecostal prophet magaya